Karazana fampielezana mailaka 10 voahitsaka tokony hampiharinao | Martech Zone
Miara-miasa amin'ireo mpivarotra mailaka marobe aho, gaga foana aho noho ny tsy fisian'ny noforonina mialoha, mahomby fanentanana mailaka nateraka ao anatin'ny kaonty aorian'ny fampiharana. Raha sehatra mamaky an'ity ianao - dia tokony ho vonona handeha ao amin'ny rafitry ny rafitrao ireo fanentanana ireo. Raha mpivarotra mailaka ianao, dia tokony hiasa hampiditra karazana mailaka maro karazana izay azonao atao mba hampitomboana ny firotsahana, ny fahazoana, ny fitazonana ary ny fampiakarana avo lenta.
Ireo mpivarotra izay tsy mampiasa fampielezan-kevitra mailaka vao manomboka izao dia diso fatratra. Ny angon-drakitra vaovao avy amin'ny tatitra momba ny benchmarky farany an'ny Yes Lifecycle Marketing dia nanambara fa na dia mitombo aza ny fanentanana amin'ny fandraisana an-tanana, dia tsy manararaotra an'io tetika tsotra io ny ankamaroan'ny mpivarotra. Trigger dia noforonina fotsiny latsaky ny 7% amin'ny fampielezan-kevitra tanteraka Ireo mpivarotra efa nandefa dia namorona efa ho 5 heny ny tahan'ny tsindry, saika avo roa heny ny tahan'ny fisokafana ary efa ho avo telo heny ny taha CTO
Sintomy ny Tatitry ny Marketing amin'ny Lifecycle Marketing
Ny mailaka voatondraka dia mailaka natomboky ny fitondran-tenan'ny mpanjifa, ny mombamomba azy na ny tiany. Tsy mitovy amin'ny fampielezana hafatra mahazatra sy be mpampiasa izay tanterahina amin'ny daty na fotoana voatondro mialoha an'ny marika.
Satria ny fampielezan-kevitra amin'ny mailaka voafitaka dia lasibatra amin'ny fitondran-tena ary ara-potoana raha toa ka manantena azy ireo ny mpanjifa iray, dia mahazo vokatra tsara kokoa izy ireo raha ampitahaina amin'ny fampielezana mailaka toy ny mahazatra (BAU) toy ny taratasim-baovao. Tsy misy fantsona tsara kokoa eken'ny besinimaro.
Ny salan'isan'ny salan'isa (AOV) ho an'ny mailaka antsinjarany tsy misy antony dia $ 56.34 raha oharina amin'ny $ 61.54 ho an'ny hafatra voatafika
Rehefa mijery manokana ny fampielezan-kevitra nateraka, ny mailaka Sabotsy nalefa tamin'ny Q1 dia nahazo tahan'ny fiovam-po 8%, saika avo roa heny ny sabotsy
Raha 65% ny mpivarotra no nanao fampielezan-kevitra Tongasoa tamin'ny Q1 2016, dia nitombo 7% izany isa izany tamin'ny taona lasa